စကားပြောကျိုးတဲ့စက်ဘီးစီးတာကောင်းသလား။ - စက်ဘီး
အဓိက > စက်ဘီး > စက်ဘီးပြောသော - မှအဖြေတစ်ခု
စက်ဘီးပြောသော - မှအဖြေတစ်ခု
သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်သင်၏စက်ဘီးစီးသည့်ပြproblemsနာများအားဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်း၏နောက်ကွယ်စိတ်ကူးဖြင့် GCN Tech Clinic သို့ပြန်သွားပါ။ ယခုအပတ်တွင်ပထမဆုံးမေးခွန်းသို့သွားကြပါစို့။ Darek Kong မှ Dura-Ace C24 ဘီးများ၌ကျဉ်းမြောင်းသောကျဉ်းမြောင်းသောဘီးများရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်အတွင်းအကျယ်မှာ ၁၅ မီလီမီတာနှင့်အပြင်ဘက်အကျယ်မှာ ၂၀.၈ ဖြစ်သည်။
သူတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့အကောင်းဆုံးကိုအသုံးမပြုသည့်အခါအတွင်းပိုင်းတွင် ၁၈ မီလီမီတာနှင့်အပြင်ဘက်တွင် ၂၃ မီလီမီတာရှိသောပိုမိုကျယ်ပြန့်သော Hunt Race aero aluminium ဘီးအချို့ကိုယူရန်စဉ်းစားနေကြသည်။ ငါ့မှာဘာပြproblemsနာတွေရှိသလဲ။ နှစ်ခုအစုံအကြား switching ကြည့်ပါသလော ကောင်းပြီ, Darek, ကောင်းစွာ, အစုံနှစ်ခုလုံးအစုံတကယ်ဘီးအားလုံးဖြစ်ကြသည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ဘီးတွေဟာနှစ်သိမ့်မှုနဲ့မြန်နှုန်း၊ လေခွင်းအားနည်းချက်နှစ်ခုကြောင့်အခုအချိန်မှာပိုပြီးခေတ်စားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ပြwhateverနာတွေ၊ သင်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားဘယ်လောက်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ အခုအချိန်မှာပွတ်တိုက်မှုတွေ၊ တင်းကျပ်တဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်အဆင်ပြေသင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့ဟာဘာတွေအကြံပြုသလဲဆိုတာကြည့်ဖို့အမဲလိုက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ၊
ကောင်းပြီ၊ ဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ဘီးတွေဟာ ၂၅ မီလီမီတာ (၂၈) မီလီမီတာတာယာတွေနဲ့အခုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာပိုကောင်းတယ်၊ လေဒီယိုဒိုင်းနမစ်နဲ့ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့တာယာတွေနဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုသုံးနိုင်တာပေါ့၊ တကယ်တော့ငါ့မှာဘီးစုံတွဲတစ်တွဲမှာအချို့ဘီးများကအခြားသူများထက်ပိုမိုကျယ်ဝန်းသည့်အနားကွပ်ရှိသည်။ မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမဆိုလျော်ကြေးပေးရန်အတွက်သင့်အား caliper ကိုယ်ထည်အပေါ်စည်ချိန်ညှိမှုကိုသင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ။ နောက်တစ်ခု NZLKevin88 မှမေးခွန်းတစ်ခုက အကယ်၍ စကားသည်နို့သီးခေါင်းပေါ်သို့ချိုးဖေါက်ပါက၊
ငါဘယ်လိုထုတ်ရမလဲ။ ကျွန်တော့်မှာ tubeless tape ရှိပြီးအရာအားလုံးကိုမဖယ်ချင်ဘူး။ ဘာအိပ်မက်ဆိုး ခင်ဗျားကစကားပြောကျိုးနေတယ်၊
ဟုတ်တယ်၊ မင်းရဲ့တာယာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအမှန်တကယ်အနားကွပ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်နိုင်မယ်၊ နို့သီးခေါင်းအဆို့ရှင်အပေါက်ကနေကျလာမယ်လို့ငါထင်တဲ့ပိုကြီးတဲ့ပုံကိုကြည့်ရအောင်။ နောက်တစ်ခုကိုပြန်ထည့်လိုက်ပြီးဒီအနားကွပ်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးအပေါက်ထဲပြန်ကျသွားနိုင်တယ်။ အဆိုပါပြောသောနို့သီးခေါင်းဘို့အနားကွပ်၌တည်၏။ ဒါပေမဲ့ဒါအလုပ်မလုပ်ပါ အချိန်နှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံမှုမရှိပါကသံလိုက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရာများစွာနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။
ဒီတော့ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာခင်ဗျား၊ ကီဗင်ဖြစ်ပါကကျည်ဆန်ကိုကိုက်ပြီး tubeless တိပ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းတစ်လုံးကိုကပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဆိုပါလွယ်ကူသောနှင့်သမားရိုးကျလမ်း။ ယခုငါတို့ Pen2paw မှကေဘယ်ကြိုးပြhaveနာတက်နေပြီ၊ သူတို့က Tiagra နောက်ဘက်ရေယာဉ်မှူးအတွက် cable anchor ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်။
သူတို့အစားထိုးဘို့ Dura-Ace ကိုသို့မဟုတ် Ultegra cable ကိုကျောက်ဆူးဖြစ်စေသုံးနိုင်သလား? ယခုသင်သည် Dura-Ace 9000 သို့မဟုတ် Ultegra 6800 ၏နောက်ဘက် derailleur မှတူညီသော clamp mounting ကိုအသုံးပြုသည့်တူညီသောတပ်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ သို့သော် D8-Ace မှနောက်ဆုံးပေါ် R8000 နှင့် ၉၁၀၀ နှင့်အတူကေဘယ်ကြိုးလမ်းကြောင်းသည်ယခင်နှင့်ယခင်မျိုးဆက်များနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသောကြောင့်မသေချာပါ။ ဤသည်သည်ဒေသခံစက်ဘီးဆိုင်သို့သွားပြီးအစိတ်အပိုင်းလေးထောင့်ကွက်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်သင်သွားသည့်အရာကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် Pack တစ်ခုနှင့်လဲလှယ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်ကိုလုပ်သောအခွံမာ၊ အဝတ်လျှော်နှင့်ဝက်အူတပ်ဆင်ဖွယ်ရှိ ချောကလက်ချစ်ကွတ်ကီးများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများလုပ်သည်။
နောက်မှ David Chapman မှမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါ။ ဒါးဗယ်ဘလော့ဆိုတာမသေချာပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၁ မြန်နှုန်းကွင်းဆက်တစ်ခုဖြင့် ၁၀ မြန်နှုန်းကွင်းဆက်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ မှန်ပါတယ်၊ 11-speed cassette တစ်ခုပေါ်မှာသွားအကွာအဝေးက 10-speed cassette ထက်အနည်းငယ်ကျဉ်းမြောင်းတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ကျွန်တော်တို့ကွင်းဆက်အစုကိုသွားတဲ့အခါကွင်းဆက်တစ်ခုချင်းစီအကြားအကွာအဝေးဟာကွင်းဆက်အများစုမှာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်ပိုကြီးအစုံ။
သို့သော်ကွင်းဆက်ကြိုးများသည် ၁၀ မြန်နှုန်းကွင်းဆက်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာကျန်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အနေဖြင့် ၁၀ မြန်နှုန်း crankset တွင် ၁၁ 'မြန်နှုန်းကွင်းဆက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်၊ အခုတော့ Tomi Saaranen မှမေးခွန်းတစ်ခုရလိုက်သည်။ Hello Jon၊ ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်ရောက်အဆင့်ပြိုင်ကားစက်ဘီးသည်ရှေ့ဘက်တွင်ကွင်းနှစ်ကွင်းပါသောသုံးမြန်နှုန်းရှေ့ဂီယာလီဗာရှိသည်။
ငါပြောင်းရန်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အတွက်နှစ်ကြိမ်လီဗာကိုနှိပ်ပါ။ 2-speed shifter အသစ်ကိုရပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ပြproblemနာကိုရှင်းပစ်နိုင်မလား။ ဟုတ်တယ်၊ Tomi၊ မင်းဆီကကြားရတာကောင်းတယ်။ ယခုတွင်သင်သည် Shimano ကိုဤနေရာတွင်အသုံးပြုနေသည်ဟုထင်နေပြီးဤကလစ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ထိုနေရာတွင်ရှိသည်ဟုထင်ရသည်၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကွင်းဆက်ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြproblemနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သာဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းအပိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ရှေ့ရထားလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အနည်းငယ်ရွေ့လျားရုံသာမက၊ မင်းကိုဖြတ်ပြီးကွင်းဆက်ချိတ်ဆွဲထားရမယ်၊ ကြိုးကွင်းကြိုးကြီးနဲ့အနားကွပ်ထဲမှာအကြီးဆုံး bracket၊ သွားအအများဆုံးဖြစ်တဲ့မင်းကစိတ်ရှုပ်စရာဆူညံသံကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
အတွင်းပိုင်းလီဗာအပေါ်အနည်းငယ်ဖိအားသည်ကွင်းဆက်ပွတ်တိုက်ကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ခါနှိပ်လျှင်၎င်းသည်ကွင်းကြိုးငယ်ပေါ်သို့ကျလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်ထင်တယ်
အကယ်၍ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်သုံးဆ crank set တိကျသောလီဗာတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုပါကသင်အမှန်တကယ်တွင် double crank set lever, shift နှင့် Matt Baldwater သိလိုသည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်အစပြုသူမေးခွန်းများကြောင့်များသောအားဖြင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့တွင်မေးခွန်းစတင်သည်ဟုထင်ကြသည်။ Shimano Road Shifter တစ်ခုသို့မဟုတ် ၁၀၅ သို့မဟုတ် Ultegra double crankset ပေါ်ရှိ triple chainring crankset အတွက်ဘရိတ်လီဗာသည်ရှေ့ derailleur ပေါ်ရှိ limit limits များအားမှန်ကန်စွာချိန်ညှိနိုင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးမည်လား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ။
ဟုတ်တယ်၊ Matt၊ မေးခွန်းကတကယ်တော့အစပြုသူပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတစ်နေရာရာမှာစလုပ်ရမယ်။ ကောင်းပြီ။ သတင်းကောင်းကတော့သင်အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ငါကဒါကိုသေချာပေါက်မထောက်ခံဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကအတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုအတွက်ဘယ်ဘက် shifter ရဲ့အလယ်အနေအထားကိုသုံးမယ်၊ ပြီးတော့အကျဆုံးအကျဆုံးဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်။ ပြင်ကွင်းဆက်သည်။ သင်ဤအားဖြင့်သင်ယူဆောင်လာသည့်အန္တရာယ်မှာ lever ယန္တရားများသည်ယိုယွင်းလာနိုင်ပြီးလီဗာများကိုသူတို့လုပ်ရန်မရည်ရွယ်သည့်အရာတစ်ခုခုလုပ်ရန်တောင်းဆိုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ကျွန်တော်ဒုတိယအလှည့်စျေးကွက်ကိုကြည့်ပြီးလူတွေထူးဆန်းနေတဲ့လီဗာတွေထဲကတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့နိုင်မလားကြည့်ရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေပြိုကျတဲ့အခါ၊ သူတို့ကမပျက်စီးစေတဲ့လီဗာတစ်လုံးကိုရောင်းလိုက်တာပါ။ အခုတော့ပက်ထရစ်ဟာကြီးမားတဲ့လက်စွပ်ကိုကားမောင်းနေရင်းနဲ့အသံကျယ်လွန်းတဲ့သံမြည်သံကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုသိချင်တယ်။ ရှေ့တွင်အံသွား ၅၀ နှင့်နောက်ဖက်တွင် ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆ နှင့် ၁၈ ခုပါရှိသည်။ အဆိုပါအသံ Ultegra 8000 ကွင်းဆက်ကနေလာမယ့်ပုံရသည်။
ဆက်တင်များသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ကွင်းဆက်အားလုံးတွင်ခြစ်ရာမရှိသဖြင့်ခြစ်ရာမရှိသလော။ ဟုတ်တယ်၊ ပက်ထရစ်။ ဒီမှာတကယ်မေးခွန်းကောင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးတာကိုမကြိုက်ဘူး။ ဦး ဆုံး၊ ဆိုင်ကယ်ကိုအလုပ်ခွင်၌နေရာချမည်သို့မဟုတ်မြေပြင်ပေါ်သို့တင်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ crank သဲများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်နိုင်သည်။ ဆူညံသံသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အမြင်အာရုံစစ်ဆေးပါ။
အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်ဟာသဟဇာတမဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်သင်ဟာအခြားအရာတစ်ခုအတွက်လဲလှယ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုတော့ချည်သံအများစုကကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ သူတို့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ကြတယ်၊ ဆူညံနေပေမယ့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်သစ် Shimano အုပ်စုတွေကအစောပိုင်းတွေထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးဆူညံသံဖြစ်စေတယ်၊ စိတ် ဤနည်းဖြင့်သင်၏စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်မစီးပါနှင့်အနည်းငယ်သာကားစီးထွက်ပါ။
သာမန်ဖိနပ်တစ်ထည်ကိုသာအသုံးပြုပြီးအနည်းငယ်စီး။ ၎င်းသည်၎င်းကိုသက်ရောက်မှုရှိမရှိကြည့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သောဆူညံသံများထွက်ပေါ်လာသောအခါအသံသည်ဆူညံသံကိုသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ စက်ဘီးများသည်ထူးဆန်း။ အံ့သြစရာကောင်းသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည့်ဤဆူညံသံအနည်းငယ်သာရှိသည်။ သူတို့ဘယ်ကလာသည်ကိုမသိရသေးပါ။ ၎င်းသည်အားလုံး၏အထူးဆန်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့၊ စက်ဘီးကိုတကယ်မြေပြင်ပေါ်ချချလိုက်လိုက်သည်။ သင်သွားသည့်အရာအားအတိအကျကြည့်ပါ၊ သင်၏လေ့ကျင့်ရေးဘီးများကကက်ဆက်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ပွတ်တိုက်ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေပါ။ အခုဆိုရင် Bogdan Voineag၊ မင်းမှာကေဘယ်ကြိုးပြissueနာရှိနေပြီလို့ပြောတယ်။
သင်က online နာမည်ကြီးတစ်ခုကနေကေဘယ်ကြိုးအချို့ကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့လဲလှယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလီဗာကပြောင်းနေတုန်းမှာကဲ့သို့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေသည်ကိုသတိထားမိသည်။ လီဗာပူးကိုဆွဲလိုက်သည့်အခါ၎င်းသည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်စွာရွေ့လျားသော်လည်းအချို့သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်
ဟုတ်တယ်ငါ Bogdan မင်းနဲ့အတူငါစာနာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခုခုမှားနေရင်ဒါကမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအမှန်တကယ်ပြင်ပကေဘယ်ကြိုးများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိမည်ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်ပြီးသေချာစွာထိုင်။ လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိပါ။ နှုတ်ကပါဌ်တော်၏အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးသဘောအရပါးပျဉ်းအောက်သို့သွားပါ။
ဒီတော့ရေချိုးကြိုးအောက်မှာအဲဒီကြိုးတွေကိုအမှန်တကယ်ဂီယာ (သို့) ဘရိတ်လီဗာတွေထဲအပြည့်အ ၀ ထည့်သွင်းပြီးသူတို့အဲဒီမှာမရွေ့ပါစေစစ်ဆေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာဘရိတ်နေစဉ်တော်တော်လေးဆိုးဝါးတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်၊ အခုသင်ကေဘယ်လ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တာနဲ့တကယ့်ချောမွေ့တဲ့၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကြိုးမှာပါ ၀ င်တာမျိုးဒါမှမဟုတ် spiral binding ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ကြိုးဘယ်မှာသွားနေတယ်၊ ​​ဒါကမင်းကိုပြောင်းလို့မရဘူး၊ ဘရိတ်လည်းမပွတ်သပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဘောပင်တစ်ချောင်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်အောင်ဆွဲထည့်ပြီးအပေါက်ကိုတိုးချဲ့လိုက်ပါ။ ကြောင်း Bogdan နှင့်အတူကံကောင်းပါစေ။
နောက်တစ်ခုကဖရန့်အဲလ်ဘတ်ဇ်ကလာတာပါ။ မင်္ဂလာပါ Jon ။ ကျွန်တော့်စက်ဘီးကိုပန်းချီဆွဲဖို့စီစဉ်နေတယ်။ ရွှေကွင်းဆက်ဟာစတိုင်နဲ့လိုက်ဖက်မှာပေါ့။ ပြproblemနာကငါ့မှာအမြစ်ရှစ်ခုကြိုးကွင်းဆက်ရှိပြီးရွှေသံကြိုးတွေမှာဂီယာကိုးလုံးနဲ့စတယ်။ ဒါဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လား။ ရှစ်မြန်နှုန်းစက်ဘီးစီးရန်အသုံးပြုပါသလား? ဟုတ်တယ်၊ လူတိုင်းကရွှေကွင်းဆက်ကိုကြိုက်တယ်မဟုတ်လား။ ငါထင်တယ်၊ ငါရွှေချည်တွေဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာသေချာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါထက်ပိုပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့ကက်ဆက်သံမဏိရှစ်နဲ့ကိုးကြိုးဟာတူညီတဲ့အထူ၊ Width တူတူပဲ၊ ပြီးတော့မြန်နှုန်းရှစ်နဲ့ကိုးကွင်းရှိတယ်။ ခြစ်သူတို့အတွင်းပိုင်းအကျယ်အတူတူရှိသည်။
ဒါတွေဟာအခြားသူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းအလျားဟာအတိအကျတူတူပါပဲ။ ဒီတော့ငါ Frank နဲ့ဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာမင်းပြောနိုင်တယ်။ ဒါအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ် မင်းရဲ့ရှစ်ခုမြန်သောချည်နှောင်မှုအတွက်ရွှေကိုးမြန်နှုန်းရွှေသံကြိုးတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါငါပြောပါလိမ့်မယ်, သင်ကစက်ဘီး၏ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ကူးရလိမ့်မည်, သူကပြီးသွားတဲ့အခါသင်နှင့်ရွှေကွင်းဆက်ပေါ်တွင်တင်, အထဲသို့ထည့်ပါနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ရုံဖြစ်ကောင်း, သင်ဆိုင်ကယ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၌သင်အလွန်ကောင်းတဲ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒန်နီယယ်လိုပက်ဇ်, သင်သည် BR-9000 ဘရိတ်ဖိနပ်အစုံနှစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကို Tiagra 4600 အနားကွပ်ဘရိတ်များပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။ သူတို့အတူတူသွားသလား မှန်ပါသည်၊ ဒံယေလ၊ အကယ်၍ ဘရိတ်ပြည့်စုံ၊ အမှန်တကယ်ဘရိတ်၊ ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဝက်အူနှင့်အခြားအရာအားလုံးရှိပါက၎င်းတို့ဆက်လုပ်သွားမည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါက၎င်းသည်အမှန်တကယ်ရာဘာထည့်သွင်းရုံသာ ဖြစ်၍ Tiagra 4600 Tiagra ဘရိတ်များနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါကအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄၆၀၀ ဘရိတ် pad များသည်မှတ်ဥာဏ်မှရော်ဘာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည့်အခွံမာသီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ t သောသင်၏ဘရိတ် calipers ပေါ်သို့လွဲချော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်၊ ဤ BR-9000 pads များသည် 4600 pads များထက်သင့်အားဘရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဘရိတ်ပြားများသာဖြစ်ပါကဖိနပ်ကိုအတော်လေးစျေးပေါ။ အမှန်တကယ်ဘရိတ်ရန်အနည်းငယ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့ဆေးခန်းကိုသင်ပျော်မွေ့ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့လျှင်၊ ၎င်းကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အပိုင်း၌ချန်ထားပါ။ နောက်လာမည့်အဖြစ်အပျက်အချို့အနက်မှကျွန်တော်ဖြေကြားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်သတိရပါ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြproblemsနာများကြုံခဲ့ရသည့်ပြသနာများရှိခဲ့လျှင်၊ shop.globalcyclingnetwork.com ရှိ GCN ဆိုင်ရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးရှိသည်။ နေရာကောင်းများ၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အသေးအဖွဲအပိုင်းအစငယ်များနှင့်ယခုအခြားကောင်းသောဆောင်းပါးအတွက်ယခုအကြိမ် GCN ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတနင်္လာနေ့အတွက်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
စကားပြောနေတဲ့စက်ဘီးစီးလို့ရမလား? ဟုတ်တယ်၊စီးနင်းလိုက်ပါနှင့်ကျိုးပဲ့သောစကားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲဆိုင်ကယ်။ ချက်ချင်းခြေလှမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သင့်သည်ပြောတယ်က၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုမထိခိုက်စေနိုင်အောင်နို့သီးခေါင်းကနေဆိုင်ကယ်။ သို့သော်သင့်တွင်မျိုးစုံရှိပါကကျိုးပဲ့သောအသံအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးစီးနင်းလိုက်ပါကဆိုင်ကယ်။ဖေဖော်ဝါရီ ၉ 2020
စကားပြောအကြားဆက်သွယ်မှုချောင်းတွေရှိပါတယ်စက်ဘီးအချက်အချာနှင့်အနားကွပ်။ သူတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမြင်းစီးသူရဲနှင့် ၀ ိုင်၏အလေးချိန်ကြောင့်အချက်အချာနှင့်အနားကွပ်အကြားဝန်ကိုလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်သည်ဆိုင်ကယ်။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးပြောတယ်ရိုးရှင်းစွာအစားထိုးသင့်ပါတယ်။ စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားသောဘီး၊စပီပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှတဆင့်မအောင်မြင်ပါ၊လုပ်နိုင်များစွာသောအရာတို့၌အရင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးနည်းမှာဘီးတစ်ခုလုံးအသစ်နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်စပီ။၂၀၂၀ မေလ ၂၂ ရက်
ဆိုင်ကယ်ပြောရေးဆိုခွင့်အများအားဖြင့် ၀ တ်မှုန်ဝါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး က high- မကြာခဏအကြောင်းမရှိဘို့အားလပ်ချိန်မြင်းစီးသူရဲတစ် ဦး ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ် pothole ထိမှန်သောကြောင့်, ထိန်းသိမ်းရန်မထားဘူးဆိုင်ကယ်ကောင်းပြီ, ဒါမှမဟုတ်ခရီးသည်ကဒီမော်ဒယ်အတွက်အရမ်းလေးလွန်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမြေပြင်အနေအထားသည်အနားကွပ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပျက်စီးစေပြီး၊စပီမြန်မြန်။
စကားပြောများသောအားဖြင့် $ 1.00 များမှာ - $ 2.00 တစ် ဦး ချင်းစီ။ မည်သည့်ဆိုင်ကိုမဆိုတစ် ဦး ချင်းရောင်းမည်စပီ။ မှအလုပ်သမားအစားထိုးရန်ပြောတယ်သင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ $ 10 - $ 20 ဖြစ်သည်။၂၀၁၃ မေလ ၂ ရက်၊
စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုရိုးရှင်းသောအတိတ်တင်းမာနေ။ ပုံမှန်မဟုတ်သော။ ဟောပြောချက်တစ်ခုအတိတ် participle ။
တစ် ဦး ပြောသောပုံကဘာလဲ?
အဲဒါကပုံအရာစက်ဝိုင်းအခြားပစ္စည်းများကဝိုင်းဗဟိုကို item ရှိပါတယ်။ စက်ဝိုင်းစကားပြောပုံကြမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တင်ပြချက်များတွင်အဓိကအရာများသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြသရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Berd PolyLightစကားပြော: သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုစက်ဘီးဘီး
UHMWP သည်အပြင်းထန်ဆုံးတစ်အလေးချိန်အခြေခံပေါ်မှာကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပစ္စည်း။ ၎င်း၏လူကြိုက်များမှုသည်၎င်း၏အလွန်ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့်တိုက်ဖျက်ခြင်း၊ သက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်မှခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ 2018
မိန့်တော်မူသောအရှည်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်သည်ဗဟိုချက်၏တိုင်းတာမှုလည်းလိုအပ်သည်။ စက်ဝုိင်း၏အချင်းဖြစ်သည်ပြောတယ်အပေါက်တစ် ဦး ၏အချင်းပြောတယ်အပေါက်နှင့် centerline ကနေအနားကွပ်အကွာအဝေး။
သင်၏စက်ဘီး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိမှုသည်သင်၏ဘီး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည် (အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောအရာပတ် ၀ န်းကျင်မှလှည့်ထွက်သော) ပါးလွှာသောသတ္တုချောင်းများသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးများဖြစ်ခြင်း (တာယာနှင့်တွဲဖက်ထားသည့်) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစက်ဘီးပြောရေးဆိုခွင့်ဝယ်ယူလမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုပြီးမှန်ကန်သောသူတွေကိုရယူပါ!
အဘယ်ကြောင့် Berd ပြောရေးသံမဏိပြောမှထက်ပိုကောင်းသလဲ
သင့်ဘီးအလေးချိန်ကို ၁၀၀ မှ ၂၀၀ ဂရမ်အထိလျှော့ချပြီးအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ယခင်ကထက်မြန်ဆန်စွာတက်နိုင်သည်။ Berd ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပုံမှန်အားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်သံမဏိထက်သာလွန်သည်။
စက်ဘီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအတွက်ပြောရမည့်အရှည်ကိုအနားကွပ်ထိုင်ခုံမှအစွန်အဖျားအထိသတ်မှတ်သည်။ ကွေးအဆုံးနှင့်အတူပြောသောအဘို့, nominal ပြောသောအရှည်ကွေးအဆုံးမှာပြောသော၏အကျယ်မပါဝင်ပါဘူး။